गजल - तिमी फूल बनेर हेर
अतीतको पानाबाट (दोस्रो भाग)
तीन सय पचासका सभासद र नया नेपालको संबिधान
बसन्त मोहन अधिकारी
तिमी फूल बनेर हेर ।
मेरो पिडा सहेर हेर ।
पूजाको सरदम बनी
मन्दिरमा गलेर हेर ।
फक्रिएर बंगैचा बिच
आफैलाई चुसेर हेर ।
बनेर सृष्टि कर्ता तिमी
सुन्दरता लुछेर हेर ।
हे निष्ठुरी भमराहरु !
आफ्नो रुप फेरेर हेर ।
जीवनको उमङ्ग बिच
आफैलाई चुडेर हेर ।
अरुको गला सजाउन
सियोमा उनिएर हेर ।
फूल जस्तै छ यो नारी
कठ्ठै ! जीवनको खेर हेर।
(अतीतको पानाको पहिलो भाग यहा छ)
यसो हेर्दा नौ-दश कक्षामा पढ्ने देखिए पनि तिनी सात कक्षामा पढ्दीरहेछिन। तिनकै क्लासमा मेरो एउटा साथी थियो जसले पढ्न ढिलो शुरुगरेको ले भक्खर् सात कक्षामा पुगेको थियो। उ बाट तिनको बारेमा केहि सोध्न थालें। तिनको खास् घर तनहुंको खैरेनीटार तिर रहेछ र यहा सानिमाको घरमा बसेर पढ्न आएकी रहिछन्। मलाइ त्यतिखेर खैरेनीटार् कहा छ भन्ने पनि थाहा थिएन। तिनी राम्री थिईन् तर अहिले झन् तिनको सुन्दरता बढ्दै गए जस्तो लाग्न थाल्यो। दिन् पर् दिन् झन् झन् राम्री। तिनले हेरेको, हांसेको, सबै राम्रो लाग्न थाल्यो। अझै बोलचाल् भने भएको थिएन। त्यसै त केटीहरु संग बोल्न गाह्रो, झन् "कुछ् कुछ् होता है" हुन थाले पछि त झन् कस्तो गाह्रो। प्रयास् चांहि जरुर् गरें। तिनी बस्ने घरको बाटो, काम् नपरे पनि अलि बढि हिंड्न थालें। तिनकी सानीमाको पसल् पनि रहेछ र केही किन्ने निहुँले पसल् पनि जान थालियो, तर नचाहिएको भए पनि सामान् किन्यो, फर्कियो, र तिनीलाइ देखिईहालेमा यसो मुस्कायो अनि हिंड्यो। खास केही प्रगति भएन।
मैले तिनको कक्षामा पढ्ने मेरो साथीसंग कुरा छेडें। उसले चिट्ठी लेख्, म दिन्छु पनि भन्यो, तर हिम्मत् भएन। त्यतिखेर कस्तो स्थिति थियो भने, कुनै केटाले केटीलाई चिट्ठी लेख्यो र त्यो स्वीकार् भएन भने त्यो चिट्ठी स्कूलको अफिसमा पुग्थ्यो अनि शिक्षकको भक्कुमार् खाइन्थ्यो । र कहिले काहि त केटाको अभिभावकलाई समेत स्कूलमा झिकाइन्थ्यो। मेरो क्लासको दुई-तीन जना आशिक-दिवानाहरुले त्यो भोगि सकेका थिए। म त झन् क्लासको फर्स्ट ब्वाइ, अनुशासन, लगनशील र जिम्मेवार नमुना बिध्यार्थी भनेर चिनिएको। कहिले कांही यो इज्जत भन्ने कुराले पनि अवरोध पुर्याउदो रहेछ। चिट्ठी दिएर कथंकदाचित् approval भएन र त्यो स्कूलको अफिसमा पुग्यो भनेत बर्बादै भयो नि। यत्तिकैमा दशैं आयो। दशैं, नयाबर्ष आदिको मौकामा शुभकामना साटासाट खुब् हुन्थ्यो। कसले कसलाई पठायो, के लेखेर पठायो, र त्यसको के अर्थ हो, खूब् चर्चा हुन्थ्यो। अकास पात्ताल् जोडेर नेपाली अनि हिन्दीमा सायरी लेख्थे। कत्ति साथिहरुको शुभकामना पत्र, प्रेम् पत्र मैलेनै लेखि दिएको पनि थिंए। स्कूलको साहित्य प्रतियोगिताहरुमा, कथा, कविता, निबन्धहरु लेख्ने गर्थें र स्कूलको भित्ते पत्रिकामा त म सम्पादक मण्डलमा नै थिएं। त्यसैले यसको साहित्य राम्रो छ भनेर केही साथीहरु प्रेम पत्र लेखाउन म कहा आउथे। मलाई यसको राम्रो अनुभव थियो। तर आफ्नो लेख्ने बेलामा कस्तो गारो।
मेरो साथीले दशैंको यो मौकामा शुभकामना पत्र पठाएर हेर्न भन्यो। मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो। बजार गएर एउटा राम्रो ग्रीटिङ् कार्ड किनेर ल्याएं, अनि आफूले उसलाई मन पराएको कुरा हल्का रुपमा राखेर, तिनलाई स्वीकार भए जवाफ लेख्नू, नभए पनि ठिकै छ नराम्रो नमान्नू वा नरिसाउनू वा यस्तै केही जे होस आफू बच्ने खालको भाषा प्रयोग् गरेर लेखें र साथीलाई दिएँ। यत्तिकैमा दशैं को छुट्टी भयो अनि त्यसपछि लगतै सेन्ट अप् टेस्ट पनि थियो। अलि याद् भएन,सेन्ट अप् टेस्ट दशैं पहिले थियो वा दशैं पछि। जे होस प्रत्यूत्तर् को प्रतिक्षा गरिरहें। प्रतिक्षाको घडी कस्तो ढिलो हुन्छ, भनिरहन पर्दैन। अति ब्यग्र र अधैर्य हुन्छ त्यो समय। त्यस माथि प्रेम पत्र लेखेको सार्बजनिक भएमा हुने लाज त छदै छ। यस्तो मान्छे ले पनि यस्तो गरेको भन्ने हुन्छ। जे होस प्रत्यूत्तर् को प्रतिक्षा गरिरहें। हरेक् दिन साथीलाई सोध्थें, जवाफ आयो कि भनेर । छैन भन्ने जवाफले निराश तुल्याउथ्यो।
Posted by: Postak_Shrestha Labels: अनुभव / अनुभूति
देशको हालसम्मको सबै खराव कार्यको लागी होलसेलमै राजतन्त्रलाई दोष लगाए पनि र गणतन्त्रको नाममा आफ्ना सबै पुराना पाप धोएर गौदान गरी चोखीन खोजे पनि हाम्रा देशका महानतम नेताहरुले आफ्नो रंग देखाउन थालिसकेका छन ।
एक जमानामा खसी बोका जस्तो गरि किनबेच भएर बदनाम भएका हाम्रा नेताहरु आजका दिनमा आँउदा सुध्रिसके भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो बिल्कुल गलत हुनेछ ।
यो कुनै व्यक्ति वा दल विषेशको कुरा होईन, तर हाम्रा नेताहरुको नैतीकताको स्तर झन झन घट्दो हालतमा छ । अझ सिधै कुरा गर्ने हो भने यिनिहरुको मूल्य '… लाई भन्दा देख्‍नेलाई लाज' भने जस्तै यति सस्तो भएको छ कि पत्याउन पनि मुश्किल हुन सक्छ ।
केहि दिन अगाडी पत्रिकामा यौन क्रिडाका लागी चाहिने औषधिको बिल सरकारी ढुकुटिमा पेश गर्ने सभासदको महानता भरिएको समाचार सेलाउन नपाउँदै यो हप्ता ३५० रुपैया मा बिक्ने सभासदहरुको आर्को समाचार आएको छ।
हालको नियमावलीमा गरिमामय संबिधान बनाउने जिम्मा पाएका सभासदले हाजिर गरेपछि दैनिक २ सय रुपैया बैठकभत्ता र १ सय ५० रुपैया यातायात खर्च गरि ३५० रुपैया पाउने व्यबस्था छ । अनि हाम्रा माननियहरु त्यो रकम प्राप्त गर्न मात्र सभामा हाजिरि जनाउन जाने गर्दछन ।
यो कुनै मनगढन्ते कुरा होईन डिसेम्बर ४ तारिखका दिन ४७ जना सभासदहरु ३५० को हाजिरी मारे पछि सभाहल बाट अन्तर्ध्यान भएछन । अब यो क्रम कति दिन देखी जारि थियो र कति दिन सम्म चलिरहनेछ भन्ने त यिनै ३५० मा बिक्ने सभासद र तिनका दलका नेताहरुलाई थाहा होला तर यो उच्च पदको निचो अबमूल्यन गर्ने सभासद र यिनका दलले कस्तो संबिधान बनाउलान र देशको कुन गती गर्ने हुन भन्ने चाहि सबैले सहज अनुमान गर्न सक्ने कुरा हुन ।
संबिधान सभाको चुनाव भएको दिनलाई छाडी पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गन्ति गर्दा पनि यो गरिमामय सभाले पुरै ६ महिनाको समय यस्तै बिबिध जन-प्रिय र जन-सेवाको कार्यमा खर्चि सकेको छ ।
हुन त केहि समय अगाडी नया नेपालको संबिधान कुन दिन, कसरी र कहाबाट लागु गर्ने भन्ने सम्मका तिथि मिति तोकीएका खवर पनि आई सकेका छन, तर विकाउ सभासदका व्यस्तताका कारण चुनाव सक्कीएको सात महिना हुन लाग्दा समेत केहि स्थानमा गर्नु पर्ने उप चुनाव समेत हुन सकेका छैनन् । फेरी सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको हालसम्मको रवैयालाई हेर्दा कसैलाई पनि यो संबिधान बनाउने हतार भएको पनि देखिन्न । जनतको बलिदान, ईच्छा, आकांक्षा सबै एकातिर राखेर हाम्रा सभासदहरु भने चिया-गफ, घाम तप्ने –बदाम खाने र दिनमा ३५० रुपैया कमाउनैमा व्यस्त र मस्त छन ।
नया संबिधान बने पछि हुने चुनावमा फेरि आईने, नआईनेमा यि ३५० का सभासदहरुलाई शंका होला र त यिनिहरु यहि सभालाई जति सक्यो त्यति तन्काउनु र लम्बाउनुमा नै लागेका छन। तर यस्ता ३५० का सभासदले कहिले संबिधान बनाउलान र कहिले देखी लागु गर्लान? खै मलाई त शंकै छ !